आँखै अगाडि सगरमाथा
सगरमाथा कुन हो ?
हिमश्रृंखला देख्नेबित्तिकै सबैले गर्ने पहिलो प्रश्न हो यो । विश्वकै अग्लो सगरमाथा आरोहण सबैलाई गर्न कठिन विषय हो । तर, नजिकबाट हेर्ने हुटहुटी नहुने सायदै हुन्छन् । आफू बसेको स्थानबाट केही सय मिटर माथि जानेबित्तिकै सबै रमाउने मानिसको स्वभाव नै हो । आँखै अगाडि सरमाथा देखिँदा खुसी नहुने कुरै भएन ।
सगरमाथा नजिकबाट हेर्न सगरमाथा बेसक्याम्प, कालापत्थर नै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । केही रकम खर्च गरेर स्याङबोचेसम्म मात्रै जान सक्ने हो भने पनि सगरमाथालाई आँखै अगाडि हेर्न र क्यामेरामा कैद गर्न सजिलै सकिन्छ । स्याङबोचेमा रहेको विश्वकै अग्लो स्थान ३ हजार ८ सय ८० मिटर उचाइबाट सगरमाथालाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ ।
काठमाडौंमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक टर्मिनलबाट सोलखुम्बु जिल्लामा रहेको लुक्ला विमानस्थल हवाई मार्गमार्फत् जान सकिन्छ ।
समुन्द्री सतहबाट २ हजार ८ सय ६० मिटर उचाइमा रहेको यो विमानस्थल आफैमा मा विश्वभरका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हो । विश्वका एडभेन्चर विमानस्थलको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको यो विमानस्थलमा पर्यटकीय सिजनमा दैनिक १ सय १५ वटासम्म उडान÷अवतरण हुने गरेको छ ।
लुक्लामा अवतरण भएपछि नाम्चेतर्फको तय गर्नुपर्छ । लुक्लादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म करिब ६२ किलोमिटरको दूरी पार गर्न पदयात्री सामान्यतया दुई साता लगाउँछन् । तर, नाम्चे भने दुई दिनमा पुग्न सकिन्छ । पहिलो दिन मानिस मोन्जो या फाक्दिङ भन्ने स्थानसम्म पुगेर बास बस्ने गर्छन् । पर्यटक र पदयात्रीले लुक्लादेखि फाक्दिङ या मोन्जोसम्म पुग्न ५–६ घन्टाको समय लगाउने गर्छन् । पदायात्रामा विश्वका पदयात्रीहरू ठेमलठेल गरेर हिँडेको देख्न पाइन्छ भने सामान बोक्ने भरियाका साथै खच्चड र चौंरीको लामो लामले बाटो जाम नै गराउने दृष्य आकर्षक देखिन्छ । फाक्दिङबाट उकालो लागेका पदयात्री ८–९ घण्टामा नाम्चे पुगिसक्छन् । नाम्चेसम्मको यात्राका लागि सबैभन्दा कठिन र रोमाञ्चक पदमार्ग नै फाक्दिङदेखि नाम्चेसम्मको हो ।
तोपडाँडाबाट ३ हजार २ सय मिटर उचाइमा रहेको स्थान हो । तोपडाँडाबाट सगरमाथादेखि थामसेर्कु हिमालसमेत देख्न सकिन्छ । विगत दुई दशकदेखि पर्यटकलाई पिक हिमाल आरोहण गराउँदै आएका कर्माजन्गो शेर्पा सगरमाथा क्षेत्रमा यस वर्ष अत्यधिक पर्यटक आएको बताउँछन् । सगरमाथा बेस क्याम्प वा अरोहण सबै जना पुग्न नसक्ने भए पनि नाम्चे र स्याङबोचेसम्म मात्रै आए पनि यसवर्षको अवलोकन गर्न सकिने शेर्पा बताउँछन् ।
ठमेलभन्दा बढी रौनक
समुन्द्री सतहबाट ३ सय ४ सय ४० मिटर उचाइमा रहेको नाम्चे पुग्दा पर्यटक नरमाउने कुरै भएन । पर्यटक झम्के साँझमा नाम्चे बजार पुग्दा नाम्चे पनि झुम्न थालेको दृष्यले सबैलाई आकर्षित गर्छ । रातभर जागा बस्ने नाम्चे साँच्चै सुन्दर सहर हो । “विगतमा यहाँका मानिसलाई एभरेष्ट भन्ने पनि थाहा थिएन, न हिमालको महत्व,” पहिलो सगरमाथा आरोहण दलका एकमात्र जस्वित सदस्य कान्छा शेर्पाले भने । सन् १९५३ मा हिलारी र तेन्जिङले आरोहण गरेपछि मात्रै हिमालको महत्व विस्तारै बुझेको शेर्पा बताउँछन् । ८५ वर्षीय शेर्पा कल्पना गरेभन्दा छुट्टै संसार नाम्चे बनेको बताउँछन् ।
काठमाडौैं र पोखरामा मात्रै पर्यटकहरू डान्सबार र रेष्टुरेन्टमा रमाउँछन् भन्ने अनुमान नाम्चे पुग्दा जोकोहीको पनि तोडिने गर्दछ । नाम्चेमा हेलिकप्टर, खच्चड र चौंरी तथा मानिसबाटै बोकेर भए पनि संसारमा पाइने खानेकुराका सबै परिकार त्यहाँका रेष्टुरेन्टमा पाइन्छ । पटक–पटक गरेर तीन पटकसम्म नाम्चे पुगेका पत्रकार कृष्णमुरारी भडारी नेताहरू स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्छन् तर यहाँको स्वर्गमा कोही नआएको बताउँछन् । “नाम्चे आएर पर्यटक हब कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा अन्य क्षेत्रमा मानिस आएर सिक्न जरुरी छ,” भण्डारीले भने । नाम्चेमा झन्डै ८० वटा होटल रहेका छन् भने दर्जनौ रेष्टुराँ र डान्सबारहरू रहेका छन् ।
१५ हजार कर तिर्न १ लाख खर्च
पर्यटकका लागि पनि खानाको सबै परिकार बनाउन सक्ने क्षमता नाम्चेका होटल व्यवसायीको रहेको होटल क्याम्प दि बेस होटलका सञ्चालक निमा टासी शेर्पा बताउँछन् । “नाम्चेलाई राज्यले नभएर स्थानीयले बनाएको हो, तर पनि हामीलाई करको मामलामा दुःख दिने गरेको छ,” शेर्पा गुनासो गर्छन् । नाम्चेका व्यवसायीलाई १५ हजार वार्षिक कर तिर्न १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत शेर्पाले गुनासो गरे । नाम्चेबाट कर तिर्न धरान जानुपर्ने अवस्था छ । “सरकारलाई पटक पटक एउटा घुम्ति सेवा ल्याएर १५ हजारको ठाउँमा बरु १ लाख कर दिन्छौं भन्दा सुनेको छैन,” शेर्पाले भने । राजधानी काठमाडौंमा नाम्चे क्षेत्रका व्यवसायीले कर तिर्दैनन् भनेर हल्ला पिट्ने काम भएकोमा पनि शेर्पाले गुनासो गरे ।
‘एभरेष्ट भ्यु’ बाट सगरमाथा नियाल्दा
नाम्चेको बसाइसँगै पदयात्री र पर्यटक पुग्ने अर्को गन्तव्य भनेको स्याङबोचेमा रहेको एभरेष्ट भ्यु होटल हो । नाम्चे बसाइलाई अविस्मरणीय बनाउन यस आसपास प्रशस्त पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिएको छ । नाम्चेबाट करिब एक घण्टाको उकालोपछि पुगिने स्याङ्बोचे विमानस्थल धुले विमानस्थल हो । हेलिकोप्टरले कार्गो उडान गर्ने यस विमानस्थलमा सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीस्थित फाप्लु विमानस्थलबाट विभिन्न सामग्री ल्याइन्छ । नाम्चेबाट २ घन्टाको उकालो हिँडेपछि ३ हजार ८ सय ८० मिटर उचाइमा रहेको एभरेष्ट भ्यु होटल पुग्न सकिन्छ । जापानी नागरिकले सञ्चालनमा ल्याएको होटेल नाम्चे नजिकैबाट सगरमाथा अवलोकन गर्ने उत्कृष्ट थलो हो । होटलको हरेक कोठाबाट सगरमाथा प्रष्ट देखिन्छ । बिहानको सुर्योदय हेर्दै कफीको चुस्की लिँदै ८ हजार ८ सय ४८ मिटर उचाइमा रहेको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको दृष्य देख्न सकिन्छ । “सगरमाथा क्षेत्र आउने सबै पर्यटक यहाँ आएर कफी भए पनि खान्छन्,” होटलका प्रबन्ध निर्देशक सोनाम शेर्पाले भने । सगरमाथा हेर्नको लागि सहज र रमणीय दृष्यावलोकन गर्नको लागि पनि एभरेष्ट भ्यु हेलिकप्टर चार्टर गरेर समेत आउने गरेको शेर्पा बताउँछन् । एभरेष्ट भ्युबाट सगरमाथामात्रै नभएर तोबुचे, लोत्से, नोत्से, आमादब्लम, थामशेर्कुलगायत दर्जनौं हिमाल देख्न सकिन्छ ।
नाम्चेभन्दा आकर्षक खुम्जुङ
अधिकांशलाई लाग्न सक्छ, नाम्चे भन्दा पनि राम्रो ठाउँ त्यो क्षेत्रमा अर्को कुन सक्छ ? तर त्यहाँ पुग्ने र घुम्नेलाई थाहा छ, खुम्जुङ क्षेत्रको आर्कषण । ३ हजार ६ सय मिटर उचाइमा ररहेको हिडन भ्यालीको उपमा पाएको खुम्जुङलाई स्याङबोचेबाट नियाल्दा अति सुन्दर देखिन्छ । सगरमाथा बेस क्याम्प नाम्चेबाटै जाने भएकोले उक्त क्षेत्र केही छायाँमा परेको छ । तर अगाडिपट्टी हिउँ नबस्ने नाङ डाँडोलाई त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भगवानको रूपमा पूजा गर्दछन् । खुम्बिला नाम गरेको यो चुचुरोको विशेषता हिउँ पर्दैन र परे पनि टिक्दैन । खुम्जुङ यसै चुचुरोको फेदीमा अवस्थित एक आकर्षक गाउँ हो । जहाँ तीन दर्जन भन्दा बढी होटलहरू रहेका छन् ।
नेपाली पदयात्रीलाई पनि सहज हुँदै
नेपाली पदयात्रीहरू अन्य क्षेत्रमा धेरै जाने गरे पनि सगरमाथा क्षेत्रमा जाने आँट हत्तपत्त गर्दैनन् । सडकबाट जान नसकिने र हवाई टिकटको चापले गर्दा नेपालीहरू त्यसतर्फ जान आँट नगर्ने पर्यटन अभियन्ता चक्र कार्की बताउँछन् । काठमाडौंबाट स्याङबोचेसम्म जानका लागि होटलहरू प्रशस्त भएकोले नेपालीहरूलाई कुनै पनि समस्या नपर्ने कार्कीले बताए । नेपालीहरूको लागि पनि प्याकेज दिँदै आएकोले अहिले खास महँगो नभएको उनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो यस क्षेत्रमा नेपालीलाई पर्यटक नमान्ने चलन नरहेको होटल क्याम्प दि बेस होटल सञ्चालक निमा टासी शेर्पा बताउँछन् । अहिले नेपालीहरूका लागि पनि केही रुम सबै होटलहरूले छुट्याउने गरेकोले स्वदेशी पर्यटकका लागि सहज हुदै गएको शेर्पाले बताए ।
समय र खर्च
काठमाडौैं–लुक्लाको हवाई भाडा एकतर्फी ५ हजार
होटलको रुम–१ हजारदेखि १५ सय
खाना खर्च– सादा खाना ४ सयदेखि ७ सय रुपैयाँसम्म
जम्मा लाग्ने खर्च–२० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म
समय ५ दिन
पहिलो दिन काठमाडौं–लुक्ला हँदै फाक्दिङ बास
दोस्रो दिन फाक्दिङबाट नाम्चे
तेस्रो दिन नाम्चे वरपर घुम्ने र स्याङबोचेसम्म जाने
चौथो दिन–फर्केर पुनः फाक्दिङ आएर बस्ने
पाँचौं दिन लुक्लामा बस्ने वा काठमाडौं फर्कने
९ महिनामा ३९ हजार ५ सय पर्यटक
सन् २०१७ को ९ महिनामा सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्राका लागि जाने पर्यटकको संख्या ३९ हजार ५ सय ४३ पुगेको छ, जुन गत वर्षभन्दा दोब्बर भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०१६ को ९ महिनामा १८ हजार ३ सय ५० पर्यटक उक्त क्षेत्रमा गएका थिए । सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी सेप्टेम्बर महिनामा १२ हजार ४ सय ७३ पर्यटक सगरमाथा क्षेत्रमा गएका छन् ।
१५ हजार कर तिर्न धरान पुग्नुपर्छ
निमा टासी शेर्पा
सञ्चालक, होटल क्याम्प दि बेस होटल
पर्यटकका लागि खानाको सबै परिकार बनाउन सक्ने क्षमता नाम्चेका होटल व्यवसायीको छ । नाम्चेलाई राज्यले नभएर स्थानीयले बनाएको हो । करको मामलामा भने हामीले दुःख पाएका छौं । नाम्चेका होटल व्यवसायीलाई १५ हजार वार्षिक कर तिर्न १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । नाम्चेबाट कर तिर्न धरान जानुपर्छ । सरकारलाई पटक पटक एउटा घुम्ति सेवा ल्याउन आग्रह गरेका छौं तर सुनेको छैन । बरु हामी १५ हजारको ठाउँमा १ लाख कर दिन्छौं ।